SAVOROVORON’NY BAKALOREA : Hohadihadiana koa ny Minisitry ny Fampianarana Ambony
Tsy ho afa-bela izay rehetra tompon’antoka tamin’ny fanaparihana ny laza adina bakalorea izay nampiteraka savorovoro goavana teo amin’ireo mpiadina tamina foibem-panadinana miisa folo. 7 octobre 2019
Mitohy ny fanadihadiana sy ny famotorana lalina hataon’ny Zandarimariam-pirenena mahakasika iny tranga iny. Nambaran’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, Ny jeneraly Ravalomanana Richard nandritra ny tafa nifanaovany tamin’ny mpanao gazety ny sabotsy lasa teo fa tsy tongatonga ho azy ny trangan-javatra tahaka ireny fa tsy maintsy misy loharano nipoirany tao. Fantatra mantsy fa tsy laza adina fotsiny no naparitaka tamin’io fotoana fa niaraka tamin’ny valiny avy hatrany.
Tsy namidy ihany koa ilay laza adina fa nomena maimaim-poana. Nilaza ny teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena fa matoa izany misy dia misy tompon’ andraikitra mifandray an-tendro ihany ihany koa tany amin’ny fotony. Nanamafy, araka izany, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena (Seg) fa tsy havahana olona ny fanaovana fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity. Na olom-panjakana ambony, na mpampianatra na mpianatra dia iharan’ny famotorana lalina avokoa mba hahitana ny tena marina.
Na hatramin’ ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika izay tompon’andraikitra voalohany amin’ny fiahiana ny fanadinana bakalorea izay dia hanaovana izay fanadihadiana izay ihany koa. “Io izany tsy ijerevena hoe olona iza na olona iza, hatramin’ny Minisitry ny Fampianarana ambony aza natao fanadihadiana. Marina fa izy no mitory fa tafiditra ao anatin’ireo olona hanaovana fanadihadiana ny tenany. Koa raha ny Minisitry ny Fampianarana Ambony aza hatao fanadihadiana mainka fa ireo olona ao ambany fifehezany”, hoy hatrany ny Seg.
Nahatratra 18 hatreto ireo olona efa voasambotra tamin’iny tranga fanaparihana laza adina bakalorea iny.
Mpampianatra sy mpianatra ni ankamaroan’izy ireo izay tsy maintsy handalo fakana am-bavany avokoa. Efa nisy tompon’ andraikitra hafa ihany koa nandraisana fepetra izay efa noesorina tamin’ny toerany. Efa nandalo fakana am-bavany teny amin’ny tobin’ny zandary ity farany ary nalefa nody avy hatrany izy taorian’izay. Araka izany dia heverina fa tsy misy ho afa-bela izay tompon’andraikitra rehetra nahatonga ny fikorontanan’ ny fanadinana bakalaroa 2019.
Na dia teo aza moa ireny savorovoro ireny dia efa nisy ny fanambaràna nataon’ny Minisitra tompon’andraikitra, ny zoma teo fa tsy hofoanana velively ary tsy haverina velively iny fanadinana iny. Ny herinandro io, araka ny fantatra, no hanomboka ny fitsarana ireo taratasim-panadinana. Ao anatin’ny 20 andro ny faharetan’izany ka tombanana any amin’ny faramparan’ny volana oktobra any no hivoahan’ny voka-panadinana.